Soomaaliya - IDG Security
— Baadhitaanka xaddiga adag ee amniga Soomaaliya.
IDG waxay hada ka howlgashaa dhamaan gobolada waaweyn ee Jamhuuriyadda Federaalka, oo ay ku jiraan Puntland iyo Somaliland. Waxaan haynaa ruqsad buuxda oo aan ugu shaqeyno sida Qandaraasle Amniga Amniga ah.
IDG waxay isku daraysaa waayo-aragnimada caalamiga ah aqoonta maxalliga ah iyo khibradda ay ku ilaaliso macaamiisheenna.
Anaga oo la kaashanayna bahwadaagtayaga soomaalida, Horn Risk Management, waxaan u suurta galineynaa ururada noocyadooda kala duwan inay si guul leh oo nabadgelyo leh uga shaqeeyaan meelaha aysan awoodin.
Khibrad caalami ah
Wadashaqeynteennu waxay ka kooban tahay aqoonta aasaasiga ah ee shirkad Soomaaliyeed oo guuleysatay iyadoo leh khibrad aan la qiyaasi karin oo Qaramada Midoobay ah iyo habka ugu wanaagsan ee caalamiga ah ee ixtiraam bixiye caalami ah
Goobahayagu In Soomaaliya
Waxaad kula soo xiriiri kartaa xafiiskayaga Soomaaliya ee ah somalia@idg-security.com
La xiriir IDG